Rajesh Koirala » Nepal-US
Five thousands7hundreds and 75 Bhutanese resettled in the US on FY 014/15
Five thousands7hundreds and 75 Bhutanese resettled in the US on fiscal year 2014/15. This is the numbers of resettled from October 1, 2014 to September 30, 2015. The U.S. federal government’s fiscal year begins on 1 October of the previous calendar year and ends on 30 September of the year with which it is numbered. Read More »
पहिलो त सुरक्षाका कारण यो भ्रमण हुने सम्भावना देखिँदैन । केही साताअघि अस्ट्रेलियाको सिड्नी र पाकिस्तानको पेशावरमा भएका आतंककारी आक्रमणपछि अमेरिका आफैंले दिल्ली वा आसपासका क्षेत्रमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई उच्च सतर्कताको सूचना जारी गरेको छ । यो सूचना राष्ट्रपति ओबामाको जनवरी २५–२६ को भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा जारी गरिएको छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने भनिएपछि तस्कर–ए–तोइबाले धम्की दिएको छ । राष्ट्रपति भ्रमणका लागि अमेरिकी सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो टोली दोस्रो पटक भारत पठाउन लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । Read More »
यस वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने अमेरिकामा नेपाली विद्यार्थी घट्दै गएको पाइयो । तर पनि नेपाली अर्थतन्त्र विश्वका महँगो र कुशल शिक्षाका लागि हजारौं विद्यार्थी दिन सक्छ भन्ने थाहा पाउँदा धेरैलाई अनौठो लाग्छ । लाग्छ, नेपाल विकासशिल (गरिब) राष्ट्र होइन । किनभने नेपालभन्दा राम्रा अर्थतन्त्र, जस्तैः हङकङ, नाइजेरिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, कुबेत, कोलम्बिया, भेनेजुयला, मलेसिया र स्पेनले नेपालभन्दा कम विद्यार्थी पठाएका छन् । विद्यार्थी अमेरिका पठाउने मुलुकमा नेपाल १५ राष्ट्रपछि छ, १६ औं स्थानमा । Read More »
तीन अमेरिकी राज्यमा भूटानी ठूलो आप्रवासी समूह
नर्थ डकोटा, भर्मन्ट र न्यु ह्याम्सर राज्यमा बसोबास गर्ने कानुनी आप्रवासीमा भूटानी ठूला समूह बनेको छ । अक्टोबर ३१, २०१४ सम्म नर्थ डकोटामा १ हजार ८ सय २४, भर्मन्टमा १ हजार ५ सय ३९ र न्यु ह्याम्सरमा २ हजार ७६ भूटानीलाई सरकारले बसोबास गराएको हो ।
अमेरिकामा ५० राज्य छन् । सरकारले ४१ राज्यमा नेपाली-भाषी भूटानीलाई बसोसास गराएको हो । नर्थ डकोटा, भर्मन्ट र न्यु ह्याम्सर राज्य उत्तर सीमामा पर्ने राज्य हुन् ।
नर्थ डकोटाको जनसंख्या करिब ७ लाख २३ हजार, भर्मन्टको ६ लाख २६ हजार र न्यु ह्याम्सरको १३ लाख २३ हजार छ । सबै तीन राज्यमा लगभग ८५ देखि ९६ प्रतिशत गोरा छन् ।
नर्थ डकोटा, भर्मन्ट र न्यु ह्याम्सरमा क्रमशः १.२ प्रतिशत, १.४ प्रतिशत र २.४ प्रतिशत एसियाली मुलुकबाट आएका आप्रवासी छन् । Read More »
यसरी जोडिने काममा सबैभन्दा सजिलो माध्यमचाहिँ हास्यव्यंग्य हुन्छ । लोकदोहोरी पनि चर्चित रहन्छन्, परदेशमा एक्लो बस्नेहरूका लागि । पशुपति शर्मा चलिरहेका होलान्, कतारी मरूभूमिमा । क्यानडाको एउटा घरमा दीपकराज र दीपाको हाँस्यव्यंग्य रूचाइँदो हो । Read More »
बूढा मरे, भाषा कता परे ?
अमेरिकी भूमीमा नेपाली-भाषी हजुरबुबा-हजुरआमा र बुबा-आमाको संख्या भूटानीको पुनर्स्थापनासँगै ह्वात्तै बढ्यो । नेपाली परिवारहरूमा अधिकांश बुबा-आमा हुनुहुन्छ भने नेपाली-भाषी भूटानी परिवारमा हजुरबुबा-हजुरआमा र बुबा-आमा हुनुहुन्छ । किन पनि भने शरणार्थी पुनर्स्थापना गर्दा परिवार एक ढिक्का आउँछ अर्थात दुई/तीन पुस्ता पुनर्स्थापित हुन्छ । नेपालबाट आउँदा सामान्यतयाः एक पुस्ता र/वा उनका सन्तान आउँछन् । अनि हजुरआमा-हजुरआमा पछि थपिनुहुन्छ, त्यो पनि कमै मात्रामा ।
नेपाली र भूटानीको पहिलो र दोस्रो पुस्तामा शैक्षिक-स्तर तुलना गर्दा फरक तथ्यांक सामुन्ने आउँछन् । नेपाली बुबा-आमाका समयमा शिक्षाको अवस्था नेपालमा केही अघिबढेको भए पनि भूटानी हजुरबुबा-हजुरआमाका पालामा शिक्षा करिब उपलब्ध थिएन भने बुबा-आमाका पालामा बढेको भए पनि निकै कम थियो । भारत पसेर शिक्षा लिने खासगरी बुबाहरू साक्षर हुनुहुन्छ, धेरै संस्कृत, नेपाली र कम अंग्रेजीमा । Read More »
परदेशमा नेपाली शिक्षण
सेप्टेम्बर लाग्दा अमेरिकाका सबैजसो स्कूल–कलेज नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि खुल्छन् । नानीहरु अंग्रेजी पढ्छन् । आफ्नो मातृभाषाको चिन्ता सबै आप्रवासीलाई हुन्छ ।
क्यालिफोर्निया राज्यको किन्डरगार्टनदेखि कक्षा १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थीमध्ये ४५ प्रतिशतले अंग्रेजीबाहेक अर्को भाषा पनि बोल्छन् । क्यालिफोर्नियामा मात्र के कुरा, घरमा बोल्ने बानीले मातृभाषा बचाउन सजिलो पनि हुन्छ ।
अमेरिकाको तथ्याङ्क विभागले सन् २०१३ अगस्टमा अमेरिकी घरमा बोलिने भाषासम्बन्धी एउटा सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्योट । तथ्याङ्क भन्छ, ‘दशमध्ये एक घरमा अंग्रेजी मुख्य भाषा होइन । त्यो अवस्था यहाँका एक चौथाई काउन्टिमा भेटिएको छ । अंग्रेजीबाहेक घरमा बोलिने मुख्य भाषा स्पेनिस हो ।’
घरमा बोलिने भाषाको सूचीमा नेपाली भाषा ‘अन्य’को सूचीमा परेको हुनसक्छ । १६ पृष्ठको ‘ल्याङ्वेज युज इन दि युनाइटेड स्टेट्स २०११’ रिपोर्टको मुख्य पुस्तिकामा नेपाली–भाषा भेटिदैन । आधिकारिकरूपमा ७७ हजार (सन् २०१४ अगस्त अन्त्यसम्ममा) नेपाली–भाषी भुटानी र अनौपचारिकरूपमा करिब २ लाख नेपाली (जनगणना २०१० ले ५९ हजार ४ सय ९० नेपाली मात्र देखाएको छ) यहाँका अल्पसंख्यक हुन् ।
यो अल्पसंख्यक नेपाली–भाषीमाझ एउटा चिन्ता र चासोको विषय छ, नानीलाई कसरी नेपाली भाषा सिकाउने । यहाँ दुई थरी नेपाली–भाषी भए, नेपाली र नेपाली–भाषी भुटानी । चिन्ता र चासो दुवैको भए पनि सजिला र अप्ठ्यारा करिब उस्तै र भिन्न छन् । पुराना वासिन्दा नयाँ आप्रवासीलाई आफ्नो भाषा नबिर्स है भनेर सचेत गराइरहन्छन् र भन्छन्, ‘घरमा आफ्नो भाषा बोल्ने गर ।’
अमेरिकामा नेपाली–कक्षाको आकार ठूलो र पुरानो छ । नेपाली नै पढ्ने-पढाउने प्रयास सन् १९६० को दशकमा ठूला मान्छेका लागि भएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) ले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ। अनेसासले लेखेको तथ्यलाई सत्य (अर्को इतिहास फेला नपरून्जेल) मान्न सकिन्छ । Read More »
अमेरिकाको कन्सासमा गत जुलाई २ को सडक दुर्घटनामा उर्मिला शर्माको निधन भयो । ‘एक कान दुई कान मैदान’ भएर फैलिने खबरलाई सामाजिक सञ्जालले सबै नेपाली–भाषीसामु पुर्‍याए । अमेरिकाका नेपाली र नेपाली–भाषी भुटानीले आफ्नै शैलीमा फेसबुक, टि्वटरमा खबर राखे । घटनाको क्षणभरमा नेपालीले उनलाई नेपाली ठाने र नेपाली–भाषी भुटानीले भुटानी । उर्मिला नेपाली–भाषी भुटानी हुन् । यो नठम्याउन्जेल उनी नेपाली पनि भइन् र नेपाली–भाषी भुटानी भइन् । तथापि उनलाई चिन्ने भुटानीहरुले ‘हाम्रै चेली’ हुन् भन्ने निर्क्योल निकालिसकेका थिए । उनलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमले नेपाली भनेर पनि लेखिदिए । Read More »
अमेरिकामा भूटानी पुनर्स्थापनाका छ वर्ष
सन् २००८ मार्चमा अमेरिकालगायत विश्वका ८ मुलुकमा थालिएको नेपाली-भाषी भूटानी शरणार्थीको पुनर्स्थापनाले ६ वर्ष पूरा गरेको छ । यस अवधि (सन् २०१४ मार्च अन्तसम्म) मा अमेरिकामा ७४ हजार ७ सय ६२ जना पुनर्स्थापित हुनुभएको छ । गत मार्च अन्तिमपछि अप्रिल ८ मा नै ७५ हजारौं व्यक्तिका रुपमा तिलकचन्द घिमिरे अमेरिका आउनुभएको छ । अमेरिकामा ७५ हजार पुग्दा विश्वका अरु ७ देशमा समेत ८८ हजार ७ सय ७० पुनर्स्थापित हुनुभएको छ । Read More »
‘ओपन डुअर्स’ मा सन् १९९५/९६ देखि अमेरिका आएका नेपाली छात्र-छात्राको तथ्यांक छ । यो प्रतिवेदनले अमेरिकामा विदेशी र अमेरिकी छात्र-छात्रा विदेशमा रहेकाको तथ्यांक प्रकाशित गर्छ । सन् १९९५/९६ पछि अमेरिका भित्रिएका नेपाली छात्र-छात्राको तथ्यांक (कोष्ठकमा प्रतिशत अन्तर) यस्तो छ : Read More »